ယူနိုက်တက်ကို ကိုင်တွယ်ခဲ့စဉ် တုန်းက တော့တင်ဟမ် ကစား သမား တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ မော်ရင်ဟို ပေးခဲ့တဲ့ မှတ်ချက်အချို့ - SPORTS MYANMAR
ယူနိုက်တက်ကို ကိုင်တွယ်ခဲ့စဉ် တုန်းက တော့တင်ဟမ် ကစား သမား တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ မော်ရင်ဟို ပေးခဲ့တဲ့ မှတ်ချက်အချို့
ဟိုဆေး မော်ရင်ဟို က သူဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းကို ကိုင်တွယ် ခဲ့စဉ် တုန်းက တော့တင်ဟမ် အသင်း မှ ကစားသမား အချို့ ကို ခေါ်ယူ ချင်ခဲ့ ကြောင်း ၊ ဒါပေမယ့် အနေအထား တွေက ပြောင်းလဲ ခဲ့ပြီ ဖြစ်တဲ့ အကြောင်း ဖွင့်ဟ ပြောကြား ခဲ့ဖူး ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် ကို ကိုင်တွယ် ခဲ့စဉ် တုန်းက မော်ရင်ဟို စိတ်ဝင်စား ခဲ့တဲ့ တော့တင်ဟမ် ဟော့ စပါး အသင်း ရဲ့ ကစားသမား တွေ ကတော့ အဓိက တိုက်စစ် ကစားသမား တွေ ဖြစ်ကြ တဲ့ ဟယ်ရီ ကိန်း ၊ ဒီလီ အလီ ၊ ခရစ္စတီယံ အဲရစ်ဆင် ၊ ဆွန်ဟောင်မင်း တို့ပဲ ဖြစ်ကြ ပါတယ် ။
ဒါကို ပြောကြား ရခြင်း ရဲ့ အဓိက အကြောင်း အရင်း ကတော့ ယခင် တုန်းက မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ဟာ တော့တင်ဟမ် ဟော့ စပါး အသင်း ရဲ့ အကောင်းဆုံး ကစားသမား တွေကို ခေါ်ယူ လို ခဲ့တဲ့ အချိန် တွေမှာ မိုက်ကယ် ကာရစ် နဲ့ ဘာဘာတော့ဗ် တို့ကို ရရှိ နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် အခု နောက်ပိုင်း ရာသီ တွေ အတွင်း မှာတော့ ယူနိုက်တက် အသင်း ဖက်က တော့တင်ဟမ် အသင်း မှ လိုချင် နေတဲ့ ကစားသမား တွေ ရှိနေ ခဲ့ရင် တောင်မှ အလွယ် တကူ မရရှိ နိုင် တော့တဲ့ အကြောင်း ၊ ဒါဟာ တော့တင်ဟမ် ရဲ့ တိုးတက် ကောင်းမွန် လာမှု တွေကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း မော်ရင်ဟို က ဆိုလို ချင်တာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာ လ တုန်းက ယူနိုက်တက် အသင်း မှ မထွက်ခွာမီ ဟိုဆေး မော်ရင်ဟို က ” မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ သမိုင်း ကြောင်းတွေ အရ ၊ အသင်းရဲ့ အတိုင်းအတာ တွေ အရ တော့တင်ဟမ် ထက် ပိုမို ကြီးမား နေလား ? ” ဆိုတာ မေးခွန်း ထုတ်ခဲ့ ဖူး ပါ သေးတယ် ။
” လေးစား သမှု တွေ အရ ကြည့်ရှု လိုက်မယ် ဆိုရင် တော့တင်ဟမ် ဟာ တစ်ကယ် ပဲ အံသြ ဖွယ်ရာ အသင်း တစ်သင်း ပါပဲ ။ ဒါနဲ့ ပတ်သက် လို့ လူတိုင်း က Yes လို့ ပြောကြ လိမ့်မယ် လို့ပဲ ကျွန်တော် ထင် ပါတယ် ”
” ကျွန်တော် တို့ တွေဟာ တော့တင်ဟမ် ကို သွားရောက် ပြီး သူတို့ အသင်း ရဲ့ အကောင်းဆုံး ကစားသမား တွေကို အလွယ်တကူ ခေါ်ယူ နိုင်လိမ့် မလား ? နိုးပါ ။ ဘာဖြစ် လို့လဲ ဆိုတော့ သူတို့ တွေက ရောင်းချ ကြမှာ မဟုတ် သလို ကျွန်တော် တို့ကို နိုးလို့ ပြောနိုင် လောက်အောင် အင်အား ကြီးလာ ကြလို့ ပါပဲ ”
” လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် အနည်းငယ် တုန်းက တော့တင်ဟမ် ရဲ့ အကောင်းဆုံး ကစားသမား က ဘယ်သူလဲ ? မိုက်ကယ် ကာရစ် ပါပဲ ။ အဲ့ဒီနောက် နှစ် အနည်းငယ် မှာ ဘယ်သူ က အကောင်းဆုံး ဖြစ်ခဲ့ သလဲ ? ဘာဘာတော့ဗ် ပါ ။ သူတို့ တွေက ယူနိုက်တက် အသင်း ဆီကို ပြောင်းရွှေ့ ခဲ့ကြ ပါတယ် ”
” အခု ကျွန်တော် တို့ သူတို့ ဆီကို သွားရောက် ပြီး ဟယ်ရီ ကိန်း ၊ ဒီလီ အလီ ၊ အဲရစ်ဆင် နဲ့ ဆွန် တို့ကို ခေါ်ယူ လို့ ရနိုင် လိမ့် မလား ? ကျွန်တော် တို့ ဒီ အသင်း ဆီကို သွားရောက် ပြီး အဲ့ဒီ ကစားသမား တွေကို ခေါ်ယူ ရရှိ နိုင်ပါ့ မလား ။ နိုး ပါပဲ ဗျာ ။ အဲ့တာ ဆိုရင် ဘယ်သူ က ပိုပြီး အင်အား ကြီးဦး မလဲ ၊ သူတို့ လား ? ကျွန်တော် တို့လား ? ”
” ဘောလုံး လောက က တစ်ကယ် ပဲ ပြောင်းလဲ သွားခဲ့ ပါပြီ ။ ဘောလုံး လောက မှာ တစ်ကယ့် ကို ထိပ်တန်း အဆင့် ရှိတဲ့ ကစားသမား တွေကို ခေါ်ယူ ရရှိ နိုင်ဖို့ ပိုပြီး ခက်ခဲ လာခဲ့ ပါပြီ ” လို့ ဟိုဆေး မော်ရင်ဟို က ပြောကြား ခဲ့တာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုတော့ မော်ရင်ဟို ဟာ တော့တင်ဟမ် ရဲ့ နည်းပြ သစ် ဖြစ်လာ ခဲ့ ပါပြီ ။